Dhalinyaro badan oo lagu soo qabtay howlgal xalay laga sameeyay Xaafado ka tirsan Muqdisho – Banaadir weyne
Dhalinyaro badan oo lagu soo qabtay howlgal xalay laga sameeyay Xaafado ka tirsan Muqdisho
Ciidamda ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa xalay howlgallo ballaaran waxa ay ka sameeyeen xaafadaha qaar ee degmada Warta-Nabada, iyadoo inta howlgalku socotay ay saameysay goobaha ganacsiga iyo isu socodka gaadiidka.
Howlgalka oo lagu qabtay ku dhowaad kontomeeyo dhalinyaro ah ayaa xoogiisa waxaa laga sameeyay inta u dhexeysa Laanta Barwaaqo ilaa laanta 3aad, waxaana Ciidamada gudaha u galayeen guryaha qaar ee la tuhmayo.
Dhalinyarada baaritaanada lagu qabtay waxaa la isugu geeyay Saldhig ciidamada Dowladda ku leeyihiin xaafada Furayaasha, waxaana markii dambe mid mid loo istaajiyay ragga la qabtay, kuwaasoo su’aalo la weydiinayay, iyadoo markii dambe la iska sii daayay inta badan dadkii la soo qabtay.
Saraakiisha howlgalka horboodeysay ayaa la sheegay inay horay u kaxeysteen tiro yar oo kamid ah dadka la soo qabtay oo lagu tuhmayo inay xiriir la leeihiin Al-Shabaab.
Howlgalka xalay ayaa ahaa mid looga hortagayay in la carqaladeeyo kormeer uu xaafadaha Xamarjadiid, Xamarbile, Nationlink iyo Suuqa Siinaay ku tagay Gudoomiye Kuxigeenka Amniga gobolka Banaadir Maxamed Tuulax, waxaana howlgalka hoggaaminayay Taliye kuixgeenka qeybta bartamaha Yaasiin Ganeey iyo Taliyaha Warta-Nabada Xuseen Cadceed. – Jowhar News